Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo markale isku dhacay….(Maxaa kolkan la isku maagay?) – Gool FM
Jose Mourinho iyo Arsene Wenger oo markale isku dhacay….(Maxaa kolkan la isku maagay?)
Byare September 7, 2016
(Nyon) 07 Sebt 2016. Haddii aad ogeyd uun in Jose Mourinho iyo Arsene Wenger ay isku dheceen bishi October 2014 ciyaar ka dhacday Stamford Bridge ku darso tirada inay markale is-qabteen inkastoo aysan gacan iskula tagin kolkaan.
Sida ay sheeganeyso jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain in Jose iyo Wenger ay markale isqabteen intii lagu guda jiray shirka sanadlaha ee tababarayaasha ee UEFA ee ka dhacay Switzerland.
Tababaraha reer Portugal ayaa la warinayaa inuu doonayay inuu fariisto meel ku dhaweyd macallinka Paris Saint-Germain Unai Emery iyo midka Real Madrid Zinedine Zidane mar uu tababare Sir Alex Ferguson hadalka ku daah furayay shirka tababarayaasha.
Haseyeeshee, markii uu Jose Mourinho waydiistay inuu fariisan karayo booskaa bannaan maadaama aan horey kuraasta loo buukin gareysan ayaa waxaa jawaab aan laga labo-labeyn soo riday Arsene Wenger oo yiri: “Maya, suuro gal ma ahan.”.
Marca ayaa intaa ku dartay inay qosleen goob-joogayaal badan halka kuwa kalena ay ismeer-meeriyeen iyagoo iska dhigaya inaysan maqlin hadalkii sirgaxsanaa.
Jose ayaa la xusuustaa inuu ku sheegay mar macallinka reer France mid ku taqasusay guul darrada iyadoona ay u dheereyd inay gacanba iskula tageen bishii October ee 2014 ciyaar ka dhacday Stamford Bridge.
Marc Bartra oo la meel dhigay kulanka Real Madrid iyo Borussia Dortmund El-Clasico
"Dhibaatada heysata Ronaldo waa in Messi uu yahay kan ugu fiican adduunka.".